नेपालमा के छैन ? « Janata Samachar
हिमालको सेतो फेटा पहाडको हरियो भोटो र तराईको पहेलो कछाड फेरेर बसेको मेरो देश मुुटुभन्दा प्यारो छ । निधारको विन्दु जस्तै मेरो देश विश्वमा सानो भए पनि प्राकृतिक दृश्यले सुन्दर र पवित्र छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको र उत्तरतर्फ हिमश्रृङखलाले प्रकृतिलाई पर्खाल लगाई प्रकृति नै मेरो देश रक्षाका लागि अहोरात्र खटेकी छिन् । हिमालको सेतो मुस्कानको स्वयम् प्रकृतिनै डाहा गर्छिन् ।
जब सूर्यको सुनौलो किरणले हिमाललाई स्पर्श गर्छ तब मेरो देशको मुहार देखेर दुनियाँको नजर मेरो देशमा अडिन्छ । स्वर्गको एक टुक्रा झैं लाग्छ मेराे देश । संसारकै प्राकृतिक सौन्दर्य जम्मा पारेर भगवानले नै यस धर्तीमा खन्याएको, चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारीको रुपमा रहेको देश, अनेकतामा एकता रहेको मेरो देश स्वर्ग भन्दा प्यारो छ ।
यहाँ शेर्पा नाच, गरुुङ नाच ,लिम्बु नाच, धान नाच, नेवारको लाखे नाचले अलग अलग जातजाति र संस्कृतिको पहिचान गराउँछ । यहाँ बुद्धका अनुयायीहरु पशुपति दर्शनका लागि आतुर बन्छन् भने पशुपतिका भक्तहरु गुम्बामा शान्ति महसुस् गर्छन् ।
तेरो र मेरो भन्ने भावनाबाट मेरो देश धेरै माथि उठिसकेको छ । धार्मिक सहिष्णुता सन्दर्भमा नेपाल विश्वकै लागि उदाहरण रहेको छ । एक अर्कालाई डाहा र इश्र्या गर्ने धर्म र संस्कृतिमा भेदभाव गर्ने जस्ता अमानवीय क्रियाकलाप गर्न नेपालीले जानेकै छैनन् ।
यहाँ कलकल बग्ने खोला र छङछङ गर्ने झरनाको आवाजमा चराचुरुङी चिरबिर स्वरको मिश्रणले एउटा अद्भूत संगीत सिर्जना हुन्छ । जसबाट अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ । मानिसले जब आफूलाई रमणीय ठाउँमा भएको अनुभुति गर्छ तब उसले सबै कुरा बिर्सन्छ । प्रकृतिसँग उसले जिउन सिक्छ र जिन्दगीमा केही गर्न सिक्छ । जब पवित्र खोलाको पानीको स्पर्श जीउसँग हुन्छ तब मानिसलाई यो जति आनन्द संसारमा अरु केही हुँदैन ।
यही कारण हो विश्वमा नेपालको नाम सुनेका र यसको बारेमा थाहा पाएका मान्छे एकपटक यहाँ घुम्न आउन नचाहने विरलै होलान् । यो पवित्र भूमिमा पाइला टेक्नुनै गर्वको कुरा हो भन्ने सोच्ने धेरै छन् । त्यसैले त रम्घाको पाखामा भानु उदाउँछन । गोसाईँकुन्डको यात्रामा देवकोटा गुनगुनाउछन् ।
यहाँको अनुपम प्रकृतिको काखमा सबै हराउँछन् । किनकी मेरो देशमा सबैथोक छ । हामी जे चाहन्छौं, त्यही छ, जस्तो चाहन्छाैं त्यस्तै छ । साँच्च्किै मेरो देशमा के छैन ? भूपीको कविताझैं म भन्छु : साँघुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सबथोक छ । ०००